बालुवाटारको सरकारी प्रकरणमा मुछिएका पौडेललाई अर्थमन्त्री उपहार — onlinedabali.com
बालुवाटारको सरकारी प्रकरणमा मुछिएका पौडेललाई अर्थमन्त्री उपहार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त रहेको अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी बुधबार नियुक्त गरेकी छन् । पौडेलसहित नयाँ मन्त्रीलाई आज सपथ खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै जिम्मेवारी हेरफेर समेत गरेका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा एकलौटी गरेको भन्दै (नेकपा) का अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले विरोध जनाइरहेका छन् । ओलीले आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको भन्दै पार्टीभित्र विरोध र आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो भन्दा ठूलो आलोचना बाहिर पनि भइरहेको छ ।
विवादित बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका विष्णु पौडेललाई कारवाही गर्नुको साटो अर्थमन्त्री बनाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध र आलोचना भइहरेको छ । यो व्यक्त सामाजिक संजालमा पनि भइहरेको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणले पनि पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइएकोमा खुलेरै आलोचना गरेका छन् । सामाजिक संजाल प्रयोकर्ताहरुले पौडेललाई बालुटार जग्गा प्रकरणको उपहार अर्थमन्त्री दिइएको बताएका छन् ।
सरकारी जग्गा दलालीमा गरेको सार्वजनिक भएसँगै पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर कानुनबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट जग्गा खरिद गरेको बताएका थिए । उनले
आफ्ना छोरा नविन पौडेलको नाममा रहेको उक्त सरकारी जग्गा उमा ढकालबाट जग्गा किनेको संचारमाध्यमहरुसँग स्वीकार गरेका थिए ।
बालुटार जग्गा प्रकरणबारे थप जानकारीः
वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ मार्फत् सत्ता हातमा लिए। कांग्रेसका नेताहरू जेल परे। कति निर्वासनमा गए। तिनै नेतामध्ये एक थिए, सुवर्णशमसेर राणा। राणा परिवारका सुवर्णशमसेरसँग धेरै सम्पति थियो। राणाविरूद्ध आन्दोलन र कांग्रेस पार्टी सञ्चालनमा उनले धेरै पैसा सके। राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दा पनि उनी र उनको परिवारका नाममा काठमाडौंमा २९९ रोपनी जग्गा थियो।
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो। आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हड्पेको भन्दै सुवर्णशमसेरका परिवार लगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागे। पञ्चायतले ‘अन्यायपूर्ण’ जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए।
जग्गा हडप्न मुख्यत: दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘भू-माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन्।
नापी कार्यालयका अनुसार उक्त जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास दक्षिण, राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय पश्चिम र सभामुख निवासबाट उत्तर-पश्चिममा पर्छ। २०६१ सालमा पनि त्यो जग्गाको भाउ चार लाख (प्रतिआना ५० हजार रूपैयाँ) मात्र हुन सम्भवै छैन।
पौडेल र डा. शोभाकान्त ढकालको लामो समयदेखि दोस्ती छ। ढकाल नवलपरासी, कावासोतीका एमाले नेता हुन्। पौडेलसँगैको जिल्ला रुपन्देहीका सांसद।
त्यो सम्भावना टार्न पौडेलले ‘लबिङ’ गरे। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको कामलाई वैधता दिने गरी माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदले २०६७ वैशाख ३१ गते एउटा निर्णय गर्यो। त्यो बेला भूमिसुधार मन्त्री सिपी मैनालीको पार्टी नेकपा मालेका डम्बर श्रेष्ठ थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त निर्णय ‘नोटिस’ मा लिँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने डिल्लीबजार मालपोतको एउटा निर्णय हालसालै सदर गरिदिएको छ।
आफ्नो उक्त निर्णयबारे माधव नेपालको प्रतिक्रिया उनका एक निकट नेता यसरी सम्झन्छन्, ‘कानुनी रुपमा सो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको हो। मुख्यसचिवहरूले त्यसको कानुनी पाटो हेरेका हुन्। सो प्रस्ताव पार्टी भित्र (विष्णु) पौडेलले फेसिलिटेट गर्नुभएको हो।’ त्यो बेला पौडेलमार्फत् पार्टीलाई चार करोड रूपैयाँ चन्दा आएको कुरा नेपालले बताएको पनि ती नेताले जानकारी दिए।
‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानी-नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै खारेज गर्ने।’
पौडेलले बालुवाटारको जग्गा २०६१ पुस २९ गते किनेको यसअघि नै स्वीकार गरिसकेका छन् । भू-माफियासँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा दलालीमा जोडिएका पौडेल दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका छन् ।